I-Carbon Fibre yeKhadi eliSebenzayo eliSebenzayo
I-2.0mm ye-carbon fiber ridge wallet
Umgangatho ophezulu webhabhile sheet sheet 1mm 1.5mm 2.5mm 3mm ikharbon yeflash lam lamoshini ukuphucula
Umbala we-anodised meta countersunk washers
Ibhanti: Ibhoksi yeHobby
Packaging: Ingxowa yeplastiki okanye ibhokisi yeCarton
Min. Myalelo: 200 Piece/Pieces
Ikhabhathi yeCarbon Fibre yamaphepha aSebenzayo [Igama lemveliso] Isipaji somnini wekhabhoni yefayibha yesiko [ubungakanani] 87 * 54 * 16mm [ukupakisha] ibhegi ye-OPP + ibhokisi [Iimpawu imveliso] ungenziwa ngemfuneko, ungongeza LOGO, promotions zentengiso, izipho. [Ukusetyenziswa kwemveliso] ukuthengisa okanye...
Ukubonelela ngokuthe ngqo ngeM3 Round Aluminium HobbyCarbon Standoff Intshayelelo yeMveliso I-S tandoff luhlobo lwezinto zokubopha, zihlala zisetyenziswa ngezikrufu.inemisonto kwicala lesiphelo, ke xa ujija iphepha, izinto ezintathu zinokwenza yonke into. (Jonga umfanekiso ongezantsi) Isebenza ngokubanzi kubomi bethu...
I-3K i-CNC yefayibha yegama lomnini wekhadi loyilo Uninzi lwabantu lunokukhetha isipaji sekhabhoni yefayibha esetyenziswa ngokuqhelekileyo. Oku kubonisa ukuba ubungcali kwaye mhle emadodeni. Ubunzima bokukhanya kunye nomphezulu omhle nawo wamkelekile kwimarike. Ke iziphumo zoluhlobo lweebhanti zecarbon fiber ridge...
Iphepha le-3K 100 yeekhabhoni kwifayibha yokusika ne-CNC ukusika I-CNC Sika umatshini weCarbon Fibre ukusuka eTshayina Ishadi ye-carbon yiphepha le-CNC. I-1: Ikhompyuter ecocekileyo, Amandla aphezulu kunye nobunzima bokukhanya, umphezulu weNice Isixhobo se-2.Raw: Ingeniswe eTaiwan okanye eJapan Toray Carbon fiber...
umatshini wekhabhoni usisi-3k umenzi welaphu lekhabhoni kwiflashidi ene-2mm, 3mm, 6mm,
Ixabiso lento: USD 56.3 / Bag/Bags
I-Fpv Frames Hobbycarbon Carbon Fibern Board Ingcaciso yeMveliso: Iipleyiti zethu zecarbon fiber zinokusika nayiphi na imilo kwaye zinokusikwa nakweyiphi na ubungakanani ngokweemfuno zabathengi . Ukuthoba imingxunya, yongeza i-chamfer kumacala omabini, yongeza umngxunya wokubala okanye ukongeza ubuso be-countersunk...
Ixabiso lento: USD 53.6 / Bag/Bags
500mm * 500mm * 2mm 3K Carbon Fibern Panel T300 Ingcaciso yeMveliso: Ishidi elipheleleyo le-carbon fiber linokusika nayiphi na imilo. Uninzi lwabathengi bethu bayayisebenzisa ukwenza i-Cnc Drone Frames, I-Cnc Carbon Frames Frames njengoko iluncedo kwaye ilukhuni Ngaphandle kweBhodi yeeCarbon Fibre, sikwanayo necuba...
Ixabiso lento: USD 53.7 / Bag/Bags
Ikharbhon ye-quadcopter yeplate yeziko Ngaphandle kwenkonzo yokusika yeCarbon Carbon Fibre eqhelekileyo, sinokuxhasa imveliso yecarbon fiber. Logama uyilo lusengqiqweni, sinokubanceda abathengi ukuba bayibone. Yeyiphi imizobo esifunayo? Sifuna ifomathi yeNqanaba. Isindululo somthengisi I-Aluminium Fasteners ,...
Ikhabhathi yebhabheli yencindi yokutshisa ubushushu Amashiti ethu e-carbon fiber acinezelwe ndawonye kunye nobushushu obuphezulu be-120 ℃ ukuya kwi-150 ℃. Ukuxhathisa kobushushu kwiphepha lephepha lekhabhoni eqhelekileyo yi-160 ℃, ukuya kuthi ga kwi-220 ℃. Isithombiso esingezantsi sibonisa ukuba siyivelisa njani...
Ikhabhathi yelayisenisi yeCarbon fiber 4 isiza Siziitayile ezi-4 zokugcwala iicarbon fayibha yabathengi bethu abakhethayo (3k twill matte / 3k twill glossy / 3k plain matte / 3k clear glossy Phakathi, iipleyiti ze-matte ze-twill zithengiswe kakhulu. Kungenxa yokuba umphezulu we-matill we-matte uthandwa ngakumbi kwaye...
Iimakhishithi zebherbon zeemoto zomdyarho Eyona nto iphambili kwiphepha elipheleleyo le-carbon fiber kukuba yikharbon emsulwa. Uhlobo lwethu lwekhabhoni yi-T300 kunye ne-T700. Umphezulu uyafana, kuphela kobunzima obahlukileyo. (T700 ＞ T300) Ngenxa yobunzima be-T300 yanele kwaye amaxabiso e-T700 ayabiza, akukho lula...
imbonakalo yefreyimu yecarbon fiber yelayisensi yethowuni Amaphepha ohlobo lweCarbon Fibre athandwa kakhulu kutshanje kwaye asetyenziswa kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla. Abathengi abaninzi bayayisebenzisa ukwenza iifreyimu zedrone, iifreyimu zeplate yelayisensi, abalawuli, njalo njalo. Zininzi izitayile...
Iifayibha zekhabhoni fayibha kunye ne-resin amazon Ingcaciso yeMveliso: Izixhobo zecwecwe yecarbon fiber epheleleyo ziyi-100% yekhabhon fiber, ngaphandle kokungacoceki kwezinto. Ubungakanani bethu obuqhelekileyo ngama-400x500mm / 500x600mm kwaye sinobunzima obuyi-0.5-7.0 mm kwisitokhwe. Siyayixhasa ubungakanani...
I-CNC isiko elenziwe ngemicwecwe yecarbon fiber Abantu abaninzi bayazi ukuba iikhabhabha ezinemikhombe zekhabhoni zineentlobo ezimbini zobuso ----- Matte no Glossy. Mhlawumbi abanye abantu banomdla wokwazi malunga nokuthi yeyiphi ethandwa kakhulu okanye indlela yokukhetha? Impendulo ngumphezulu we-matte. Kungenxa...
Ixabiso lento: USD 43.6 - 73.5 / Bag/Bags
I-CNC isika ikhabhathi ye-carbon fiber nge-countersunk hole Abanye abathengi baya kongeza inkqubo ekhethekileyo yokwenza uyilo lwabo lube lolukhethekileyo ngakumbi nangaphezulu. Baya kongeza i- chamfer emaphethelweni. Oku akunakuphepha kuphela ukukrola izandla kodwa kuya kwenza uyilo lube mhle ngakumbi . Kwakhona,...
Isakhelo sedrone ye-UVA kwiiplate zekhabhoni Ingcaciso yeMveliso Amaphetshana ethu e-Carbon Fiber ahlukeneyo zizaleya ezininzi ze-carbon ezingafunekiyo kwi- 0 kunye ne-90 degrees . Kwaye ibhodi yethu egcweleyo yeCarbon Fibre iphilisa emva kokuphilisa ngeqondo lobushushu eli-120 ℃ -150 ℃ Ifayibha ephezulu ukuze i-resin...
Iicarbon ze-carbon ze-carbon fiber eyi-1k Ingcaciso yeMveliso Ubume obulula obunokubakho okungapheliyo. Ibhodi egcweleyo yeCarbon Files iyakwazi ukusikwa, kuchwechwe, kucocwe, kugalelwe, kwahonjiswa, kwagqitywa kwaye kwagqitywa. Imilo enye elula inokuba yinto enzima kakhulu. Zeziphi ezinye iimveliso esinazo...
cnc ukusika ikhabhathi yeplastikhi yeplastikha yeplanga Ingcaciso yeMveliso Sinokubonelela ngenkonzo yokusika ye-CNC kule mifanekiso igcweleyo yecarbon fiber. Ngalo lonke ixesha unombono, singawuqonda. Ibhodi egcweleyo ye-carbon fiber iya kuhlala ikwanyamezele amaqondo obushushu angama-120 ℃ Inkqubo ekhethekileyo...
Ingcaciso yeMveliso Imveliso Eliphezulu lamaGqibela 100 eeKlasi zeFlash Shin Shin eziGqibeleleyo Isixhobo I-3k yangempela yeCarbon Fibre Ubungakanani kunye neephaneli njengoko kufuneka / yenziwe ngokwezifiso I-MOQ I-50PCS ngaphandle kwelogo, 200pcs ine-logo Ukuprinta Ukuprintwa kweSlik / ukuhambisa amanzi...